हानपासको उपहार योजना सार्वजनिक, ५०लाख जित्नुहोस – Online Wave TV
हानपासको उपहार योजना सार्वजनिक, ५०लाख जित्नुहोस
wavetv,हानपास रेमिटले आफनो ग्राहकलाई ५० लाखको उपहार योजना सार्वजनिक गरेको छ । हानपासबाट पैंसा पठाउने आफना ग्राहकह?मध्येबाट पहिलो हुनेले ५० लाख वन प्राप्त गर्नेछ । त्यसैगरी दोस्रो,तेस्रो हुनेले क्रमश ३० लाख,दश लाख वन पाउनेछ । सो कार्यक्रम अन्र्तगत अप्रिल २३ देखि मे २३ सम्मको अवधि तोकेको छ । मे २४ तारिखमा लक्की ड्रमार्फत विजेता छनौंट गरी फेसबुकबाट नतिजा लाईभ गरी घोषणा गर्नेछ ।
विस्तुतमा तल हेर्नुहोला ।
पैसा पठाउनुहोस,,५० लाख जित्नुहोस HANPASS SEND MONEY EVENT for ALL Customers 1. ईभेन्ट अवधि – अप्रिल 23 -मे 23 सम्म 2. पुरस्कारहरू – पहिलो : 50 लाख वन (1 जनालाई) – दोस्रो : 30 लाख वन (1 जनालाई) – तेस्रो : 10 लाख वन (1जनालाई ) – सान्त्वना : 1 लाख वन (10 जनालाई) 3. बिजेता घोषणा – FB live / May 24, pm 8(Transaction नम्बरको आधारमा लक्की ड्र सफ्टवेयर बाट) 4. ★HOW TO PICK WINNER★ 1-यो अवधि भर हानपास बाट पैसा उठाउनेहरु स्वत सहभागी गराईनेछ। 2- रेन्डम सिस्टमबाट Transaction Number को आधारमा छानिने छ। 3- बिजेता छनोट गर्दा 3rd, 2nd ,1st गरेर छानिने छ। * Transaction Number को 8 अङ्कलाई पालै पालो देखाईने छ। * जसको Transaction Number को 8 अङ्क लक्की ड्र सिस्टमको Screen मा देखिने 8 अङ्क संग मिल्दछ ऊ नै बिजेता हुनेछ। 5. नोट – जति धेरै पटक रेमिट गर्यो उतिनै धेरै सम्भावना – लाईभबाट नै बिजेतालाई कल गरिनेछ। – उपहारमा लाग्ने Tax बिजेताले तिर्नु पर्ने छ।